Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / WOWOW Pop Up Drain Stopper Ukubuyiselwa Izingxenye
i-pop up drain isakhiwo sethusi, esiqinisekisa amandla nokukhuthazela. Ukuphela okumnyama nokune-chrome, okungaheha ngokubukeka.
pop up drain futhi uphakamise induku i-X3001 iyisizinda sokulinganisa i-pivot pole ne-pivot yethusi, kanye ne-washer enzima enjoloba yokuvikela izimbobo. Ukuqedwa kwayo kwe-chrome ekhazimulayo kufanelana nokunamathiselwe okusinki okusetshenziswa kakhulu, okusho ukuthi igumbi lakho lokugezela lifaka ukubukeka okubumbene. Ungayifaka ngokuphephile, inqobo nje uma uKeeney esekela imikhiqizo ekhawulelwe.
Bathroom faucet ize
Ngokugcwala okugcwele indawo yangasese yokucwila enamamitha wedayidi wokuhambisa 1-1 / 2 ”noma 1-3 / 4”
Ubungako obujwayelekile be-US
Umphezulu we-chrome ogqamile
Ukufakwa kuyinkimbinkimbi kancane, kepha imfundiso yethu icacile.
Uyini Umehluko phakathi kwe-Pop Up Drain Ngokuchichima Futhi Ngaphandle?
1. Umehluko phakathi kokuthi amanzi angavinjwa yini ukuthi agcwale ngaphansi komhlaba. Ukugeleza kwe-sink ku-ware yangasese kunomsebenzi wokuchichima. Lapho amanzi ku-ware yokuthuthwa kwendle enyukela ekuchichimeni, uzosuka endaweni yokukhuculula indle, futhi ngeke uchichime ukugcwala ikhaya lakho; Lapho ichichima, izogquma iqonde ngqo emhlabathini.
2. Umehluko phakathi kwenhlanzeko nenhlanzeko. Isitsha sokuwasha ku-sanction ware sinomsebenzi wokuchichima. Lapho amanzi asesitsheni sokugeza esedlula isilinganiso esithile, amanzi asesitsheni sokugeza azokhishwa ngokuzenzakalelayo asuka lapha, futhi ngeke aqongelele esitsheni sokugeza. Ngomjiko osebenzayo, amanzi asesisekelweni aqoqana esitsheni, aqoqe ama-bacteria, futhi awahlanzekile.
3. Ukuvikelwa kuhlukile lapho ukhohlwa ukucisha amanzi. Umsele wokucwila endaweni yokucoceka unomsebenzi ogcwele, noma ngabe ukhohlwa ukucisha amanzi, amanzi ayogeleza avele, futhi ngeke ageleze emhlabathini; umsele ngaphandle komsebenzi wokuchichima, lapho ukhohlwa ukucisha switch, amanzi ayochichima emhlabathini.
I-WOWOWfaucet's sanre ware basin drainer ichichime ukwenza indawo yakho yangasese ihlanzeke futhi ihlanzeke kakhulu.
I-SKU: X3001-chrome Categories: Izesekeli zefenisi, izesekeli Tags: Assembly, Isinki sokugeza, Ukufaka esikhundleni